Amanqaku kaJosie Scotchmer Martech Zone |
Amanqaku ngu UJosie Scotchmer
UJosie Scotchmer nguMphathi weNtengiso e Imeyile, ukuthengisa nge-imeyile kunye neqonga le-imeyile yokuthengisa. UJosie ngumphathi weB2B2C onentengiso onomdla kunye nendlela yorhwebo kunxibelelwano lwentengiso.
NgoMgqibelo, Oktobha 28, 2017 NgoMgqibelo, Oktobha 28, 2017 UJosie Scotchmer
Chitha usuku uhamba ujikeleza eLondon, eNew York, eParis okanye eBarcelona, ​​enyanisweni, nasiphi na isixeko, kwaye uya kuba nesizathu sokukholelwa ukuba awuzange wabelane ngaso kwimidiya yoluntu, khange yenzeke. Nangona kunjalo, abathengi base-UK naseFrance ngoku babhekisa kwikamva elahlukileyo kwimidiya yoluntu iyonke. Uphando lutyhila amathemba obundlobongela amajelo eendaba ezentlalo njengoko yi-14% yabathengi abaqinisekileyo ukuba iSpapchat isaza kubakho kwiminyaka elishumi.